Lacagta uu madaxweyne Farmaajo mushaar ahaan ku qaadan doonno xilka madaxweynaha (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Lacagta uu madaxweyne Farmaajo mushaar ahaan ku qaadan doonno xilka madaxweynaha (AKHRISO)
Madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa la sheegayaa inuu ka tagay shaqadii uu ka haayay dalka Mareykanka, gaar ahaan xafiiska Buffalo ee waaxda gaadiidka gobolka New York.
Madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay in hal maalin kadib markii xilka loo doortay inuu ka tagay shaqadii uu ka haayay xafiiskaasi oo ah waaxda gaadiidka ee New York (The Buffalo office of the New York Department of Transportation).
Mushaarka uu madaxweyne Farmaajo ka qaadan jiray shaqadaasi ayaa la sheegay inay ahayd sanadkii $83,954 doollar, waxayna taasi ka dhigantahay in bil walba uu qaadan jiray ku dhawaad $7,000 doollar.
Dhinaca kale, shaqaalaha iyo madaxda waaxda uu ka shaqeyn jiray madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay inuu mar waliba ku taami jiray sidii uu dib ugu noqon lahaa Soomaaliya, isagoo xilligii uu hore usoo noqday ra’iisul wasaaraha laga dilay 7 ka mid ah ilaaladiisa.
Ugu dambeyntii, madaxweyne Farmaajo ayaa haatan mushaarka ahaan sanadkii u qaadan doonno $120,000 dollar taas oo ka dhiganta in bishii uu qaadan doonno $10,000 doollar islamarkaana ay u wehliso gunnooyin kale, laakiin madaxda Soomaalida ayaa lacago badan ku qaata amaradooda, iyagoo aan ku ekaan mushaarka u qoran oo kaliya.
Madaxweyne Farmaajo oo la taagan kooxda uu dalka Mareykanka kala shaqeyn jiray xafiiska Buffalo ee waaxda gaadiidka gobolka New York